दिपक बोहोरा र क्यामेरामेन अनिल ढुंगेलले पनि दिए बयान, के भने ?
काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आ’त्मह’त्या प्रकरणमा न्युज २४ बाट प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका निर्माता दिपक बोहोरा र क्यामेरामेन अनिल ढुंगेलसँग पनि बयान लिइएको छ।
बयानमा बोहोराले पत्रकार शालिकरामको आ’त्मह’त्यापछि आफूहरुले अस्मिता कार्कीलाई भेटने प्रयास गरेको स्वीकारेका छन्। उनले पुडासैनीको आ’त्मह’त्या प्रकरणमा आफ्नो पनि नाम जोडिएर समाचारहरु आउन थालेपछि क्यामेरामेनसँग अस्मिताको फोन नम्बर मागेर अस्मितालाई फोन गरेर भेट्न गएको बताएका हुन्।
उनले आफूसहित क्यामेरामेन अनिल र रवि लामिछाने ग्रिन सिटी अस्पताल अस्मितालाई भेट्न गएको तर अस्मिताले भेट्न नमानेपछि आफूहरु १ घण्टा कुरेरै भेटै नगरी फर्किएको बयानमा बताएका छन्।
निमोनियाको बिरामी आमाको उपचारका निम्ती अस्मिता ग्रिन सिटी अस्पतालमै थिइन्।
क्यामेरामेन अनिल ढुंगेलले पनि अस्मितालाई भेटन बारम्बार प्रयास गरेको तर भेट हुन् नसकेको बताएका छन्।
कुनैपनि व्यक्ति विरुद्ध कुनै कसुरको आरोप लगाउनुपूर्व प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण र अन्य तथ्यकाबारेमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको व्यहोरालाई अभियोगपत्र भनिन्छ । सञ्चारकर्मी लामिछाने विरुद्ध पेस भएको अभियोगपत्र कत्तिको बलियो छ त ? जिल्ला अदालत चितवनबाट कान्तिपुरले २३ पेज लामो अभियोगपत्र प्राप्त गरेको छ ।
के छ त अभियोगपत्रमा ?